‘पुँजीवाद बारे तिनीहरूले नभनेको २३ कुरा’ – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७५, १५ माघ मंगलबार १३:०७ January 29, 2019 487 Views
ह्या जुन चाङ दक्षिण कोरियन हुन् । अहिले इङ्ग्ल्यान्डको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा पढाउँछन् । उनको विशेषज्ञता भनेको संरक्षण र राज्य औद्योगिक नीति हो । उदाहरणका लागि परम्परागत अर्थतन्त्रले गर्न सकिँदैन भनिन्छ । तिनीहरू सक्छन् भन्ने उसको आफ्नै जमिन स्पष्ट प्रमाण हो र यो उनको परम्परागत अर्थतन्त्रको त्रुटिपूर्ण ज्ञानलाई प्रदर्शित गर्ने सुरुआत मात्र हो । ह्या जुन चाङको उक्त किताब एकैपटक पेनगुइन ग्रुप लन्डन, न्युयोर्क, टोरोन्टो क्यानाडा, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, भारतलगायत दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनगृहहरूले एकैचोटि २०१० मा प्रकाशित गरेका थिए ।
उनले उक्त पुस्तकमा उनको भनाइमा परम्परागत पुँजीवादले भन्न नसकेका २३ वटा बुँदाहरूमा १— खुला बजारजस्तो त्यस्तो कुनै चीज छैन । २— कम्पनीहरू उनीहरूका मालिकको चाहनामा सञ्चालन गरिनु हुँदैन । ३— अधिकांश धनी देशका जनताले तिनीहरूले सक्नेभन्दा बढी मूल्य तिर्छन् । ४— वासिङ मेसिनले विश्वमा इन्टरनेटले भन्दा बढी परिवर्तन ल्यायो । ५— जनताका बारेमा असाध्यै खराब मान्नुभयो भने तपाईंलाई खराबी हात पर्छ । ६— बृहत् सूक्ष्म स्थिर अर्थतन्त्रले विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याएको छैन । ७— खुला बजार नीतिहरूले अपवाद गरिब राष्ट्रहरूलाई मात्र धनी बनाएको छ । ८— पुँजीको राष्ट्रियता हुन्छ । ९— हामी उत्तरऔद्योगिक युगमा बाँचेका छैनौँ । १०— संयुक्त राज्यको विश्वमा उच्च जीवनस्तर छैन । ११— अफ्रिका पूर्वनिर्धारित अविकसित राष्ट्र होइन । १२— सरकारले विजेतालाई तान्न सक्छ । १३— धनी मान्छेलाई अझ धनी बनाएर हामीलाई धनी बनाउँदैन । १४— अमेरिकी प्रबन्धकहरू अधिक मूल्य छन् । १५— गरिब राष्ट्रहरूका जनता धनी राष्ट्रहरूका जनताभन्दा बढी उद्यमशील रहेका छन् । १६— हामी बजारलाई वस्तुहरू छाड्नका लागि अधिक सक्षम छैनौँ । १७— धेरै शिक्षा आफैँले देशलाई धनी बनाइराखेको छैन । १८— संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि सामान्यतः कुन मोटर आवश्यकताअनुसार राम्रो हुन्छ । १९— साम्यवादको पतनका बाबजुद हामी योजना अर्थतन्त्रमा बाँचेका छौँ । २०— समानताको अवसर सायद निष्पक्ष हुन सकेको छैन । २१— ठूला सरकारले जनतालाई परिवर्तन गर्न खुला बनाउँछ । २२— वित्तीय बजारहरू कम आवश्यक बन्छ, धेरै होइन, कार्यकुशल र २३— राम्रो आर्थिक नीतिलाई राम्रो अर्थशास्त्री आवश्यक पर्दैन ।
पुस्तकको सार के हो ?
यी माथिका उपशीर्षकहरूमा उक्त पुस्तकको आयत रहेको छ । ह्या जुन चाङ कुनै माक्र्सवादी अर्थशास्त्री होइनन्, बरु उनी एक पुँजीवादी अर्थशास्त्री नै हुन् । ती २३ वटा बुँदालाई छोटकरीमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
स्वतन्त्र बजारका बारेमा त्यस्तो कुनै खास कुरा छैन । यी वर्षहरूमा खुला बजारको खुबै गुणगान गाइएको छ । यो एउटा ठूलो पौराणिक पशुका रूपमा । यो सरकारको हस्तक्षेपका कारणले होइन, यो प्रायः स्वतन्त्र रहन नचाहने निजी क्षेत्रको कारणले कुनै परबाहबिना यस्तो भन्ने गरिन्छ । यद्यपि जब हामी काल्पनिक रूपमा बजारबाट मुक्त हुन सक्छौँ, त्यस समयमा हामीले बारम्बार राम्रो गरेका छैनौँ । कम्पनीहरू उनीहरूको मालिकको चाहनाअनुसार चल्नु हुँदैन । त्यो पूर्ण रूपमा होइन । ‘सेयर होल्डर मूल्य’ कहाँसम्म भने पूर्वराजा आफैँ, पूर्वइलेक्ट्रिक जनरल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भर्खरै यसलाई छाडिदिएका थिए । व्यापारमा योगदान गर्न संवेदनशील भई लामो समयको सफलता आवश्यक पर्दछ ः केवल समान लगानी मात्र होइन, रोजगारहरू, उपभोक्ता र योजना समाज पनि आवश्यक पर्छ ।
धनी देशका जनताले उनीहरूले सक्नेभन्दा बढी भुक्तानी गरिरहेका छन् । यो कामका लागि, एन्टिबायोटिकको आविष्कारपछि न तपाईंले न मैले आफू जन्मेको देशका लागि लायक केही गरेका छैनौँ । यसको मतलब हामीले अपराध महसुस गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यसको मतलब हामी जुन समाजबाट आएका छौँ त्यहाँ ठूलो सफलताको कारण हो, हाम्रै आफ्नो क्षमताले होइन । कपडा धुने मेसिनले इन्टरनेटले भन्दा ठूलो परिवर्तन विश्वमा ल्याएको छ । वासिङ मेसिन र अन्य श्रम—सञ्चित गर्ने उपकरणहरूले महिलाको भूमिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइदिन सम्भव बनाइदियो जसलाई नारीवादीका रूपमा चिन्छौँ । त्यसैगरी बिना एयरकन्डिसन, अमेरिकामा सनबेल्ट हुनेछैन । ट्विटर नजिक आउँदैन ।
जनतालाई खराब मान्नुभयो भने तपार्इंले खराब नै पाउनुहुनेछ । हो, ७० प्रतिशत मान्छेको स्वभावमा सम्भवतः व्यक्तिगत चाहना रहेको हुन्छ । तर बाँकी ३० प्रतिशत जुन ठूलो हिस्सा हो र पुँजीवादी अर्थशास्त्रले उनीहरूका बारेमा संवेदनशील भएर सोचेको हुँदैन । कम्पनी (देशहरू) हरूले उनीहरूले आफ्नै स्वार्थमा एक्लै चलाएका राम्रा हुन्छन् भन्ने बुझ्छन् ।
स्थायी बृहत् सूक्ष्म अर्थशास्त्रले विश्वमा अर्थतन्त्रमा स्थायित्व बनाएन । निर्दयी मुद्रास्फीति नीतिहरूले सजिलै मुद्रास्फीतिका विरुद्धको लडाइँलाई सजिलै ध्वस्त पारिदिन सक्छ । राज्यको पैसाको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको रक्षा कम महत्वको हुन्छ । हामीसँग भएको कडा बनेको पैसाले हाम्रो वित्तीय असक्त सङ्कट बनेको छ । खुला—बजार नीतिहरूले एकदमै अपवाद मात्र गरिब देशहरू धनी भएका छन् । जसरी मैले मेरो किताबको छैटौँ खण्डमा बहस गरेको थिएँ– प्रत्येक विकसित राष्ट्र इङ्ग्ल्यान्ड खस्किएर अहिलेको दिनमा संरक्षणवादको बाटो अपनाएका र राज्य उद्योग नीति जुन विशुद्ध खुला—बजारहरू थिएनन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वतन्त्रतासम्म त्यही खेल राम्रोसँग खेल्यो । पुँजीको राष्ट्रियता हुन्छ । पुँजीको परिचालनले भूमण्डलीकरण विश्वमा प्रशस्त कारण निम्त्याउँछ तर पुँजीलाई विराष्ट्रियकरणको इथरमा तैरिएको भन्ने भन्ने कुरा मिथक हो । पैसा जहिले पनि कसैको हुन्छ, ती कोहीको पासपोर्ट र घरको ठेगाना हुन्छ । यसको मालिक को हो भन्ने हुन्छ तर उत्तर आउँछ ‘कोही पनि होइन ।’
हामी उत्तरऔद्योगिक युगमा बाँचेका छैनौँ । हामी कस्तो मिथक फैलाउँछौँ भने संयुक्त राज्यको उत्पादनसँग जापान र जर्मनीको उद्योगहरूले कम ज्यालाका बाबजुद कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तपाईं काम वा सुपरमार्केटतिर अधोभारणमा चढ्न सक्नु हुँदैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग विश्वको सबैभन्दा उच्चखालको जीवनस्तर छैन । दुवै यहाँ र समुद्रपारका एकदमै खराब नीति, तिनीहरू अमेरिकी पुँजीवादको उल्था स्पष्ट रूपमा सर्वोत्कृष्ट मान्ने गर्दछन् । तर हाम्रो प्रतिघन्टा आम्दानी क्रयशक्तिका आधारमा विश्वमा आठौँ रहेको छ ।
अफ्रिका पूर्वनिर्दिष्ट अल्पविकसितभित्र पर्दैन । १९६० देखि १९७० सम्म तिनीहरूले प्रगति गरिराखेका थिए । ती कारणहरूले तिनीहरू गरिब छन् । अरू राष्ट्रहरू एकपटक गरिब थिए— यसको मतलब तिनीहरूले उस्तै समाधानहरूलाई लागू गरे भने उनीहरूको गरिबीलाई स्थिर राख्न सकिन्छ ।
सरकारहरूले जित्नेहरूलाई तान्न सक्छन् । लापर्बाही गर्नु हुँदैन, सधैँभरि होइन तर खुला बजार सधैँभरि सही हुन सक्दैन र सरकार सधैँ गलत हुँदैन । संयुक्त राज्यको सरकार इरिक नहर, अन्तरमहाद्वीपीय रेलमार्ग, अन्तरप्रदेशीय राजमार्ग प्रणाली र इन्टरनेटका लागि उत्तरदायी थियो । हवाईजहाज र अर्धसूचालक उद्योगहरूका बारेमा भनिराख्नु परेन । पूर्वी एसियाका सरकारहरूले त्योभन्दा बढी गरेका थिए ।
धनी मान्छेलाई अझ धनी हुन दिनुले हामी बाँकीलाई धनी बनाउँदैन । थोपाचुहाइ अर्थशास्त्रले काम गर्दैन किनभने धनसम्पत्ति थोपाचुहाइ होइन । यसले माथि लग्छ, त्यसैले धनीहरू धनीको पहिलो स्थानमा रहन्छन् ।
संयुक्त राज्यका प्रबन्धकहरूले अत्यधिक मूल्य लिन्छन् । अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा बढी मूल्य तिर्ने निगम प्रबन्धकहरू छन् । हाम्रा उद्योगहरूमा उत्कृष्ट व्यवसायी छैनन् । के हामीले हाम्रो पैसाको मूल्य पाएका छौँ ? तपाईंले हिसाब गर्नुस् ।
गरिब देशका जनता धनी देशका जनताभन्दा बढी उद्यमशील रहेका छन् । हँ, तिनीहरूले एउटा टोपमा फलफूल उभ्याउन खुला गर्छन् । यो उनीहरूको गरिबी बन्द भएको छैन । त्यसैले उनीहरूलाई धेरै ‘ उद्यमी’ भन्न बन्द गर्नुस् । उनीहरूको समस्या अरू स्थानहरूमा पनि रहेका छन् ।
हामी बजारलाई सामान छाड्न धेरै चलाख छैनौँ । वास्तविक विश्वमा, बजारहरूले उनीहरूको रखवाला गर्दैनन् । तिनीहरूलाई नियन्त्रित गर्न आवश्यक छ । कसरी र कुन किसिमले पार्टी राजनीति कानुनी हुन् तर अनियन्त्रित अर्थतन्त्र खतरनाक स्वैरकल्पना हो ।
धेरै शिक्षा आफैँले कुनै देशलाई धनी बनाउँदैन । तपाईं शिक्षा मात्र चाहानुहुन्न तर उद्योगहरूमा शिक्षित मान्छेले काम गर्दछन् । कागज—धकाल्ने शिक्षा चाहिएको छैन । अमेरिकाले व्यावसायिक तालिम शिक्षालाई बिर्सेको बेपरबाह गरेको छ । फेरि जर्मनी र जापानलाई सोधौँ ।
सामान्यतः कस्तो मोटर अमेरिकाका लागि आवश्यकताअनुसार राम्रो हुन्छ । त्यहाँ एकपटक भीमकाय निगमहरूको चाहनासँग अमेरिकाको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चाहनाको गठबन्धन हुन पुगेको थियो । त्यो लामो समयसम्म चल्यो । हामीले छाडिदियौँ भने बहुराष्ट्रियहरूले राज्यहरूलाई होटेलको जस्तो व्यवहार गर्नेछन् ।
साम्यवादको पतनपछि पनि हामी योजना अर्थतन्त्रमा नै बाँचिरहेका छौँ । पुँजीवादी योजना अर्थतन्त्रहरू जो उपनगरीय क्षेत्रमा बस्छौँ । हामीजस्ताले चाहेको जस्तो खुसी होस्, त्यसलाई केवल जब हामीले परिणाम प्राप्त गर्छौं । वास्तविकता के हो भने जनताले वासिङ्टनलाई हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्न देशमा योजना कति महत्वपूर्ण छ भनी गुनासो गरेका छन् ।
समानताका अवसरहरू सम्भवतः स्वच्छ नहुन सक्छन् । एउटा ‘तपाईंलाई के योग्य लाग्छ’ समाजमा राम्रो सुनिन्छ, यसका धेरै बाटाहरूमा तर गुमाउनेहरूले पनि न्यूनतम् केही न केही पाउनु आवश्यक छ ।
ठूला सरकार जनतालाई परिवर्तन गर्न धेरै खुला बन्छन् । किनभने यसले तिनीहरूलाई धेरै जोखिम मोल्न सक्षम बनाउँछ । केही अर्थतन्त्रहरूले ठूलो कल्याणकारी राज्यहरूले धेरै राम्रो गरेका छन्, तपाईं सोच्नुहुन्छ । यो तपाईंसँग कस्तो खालको ठूलो राज्य छ भन्नेमा भर पर्दछ । ठूलो राज्य जहिले पनि हार्नेवाला छ । किन अमेरिकाले स्विडेनबाट पैसा ऋणमा लिन्छ ?
वित्तीय बजारहरू थोरै हुनुपर्दछ, धेरै होइन, यही नै सक्षम हुन्छ । उद्योगहरूमा जस्तो वित्तीय बजारहरूमा कार्यकुशलता उस्तै हुँदैन । यसको सजिलो माने हुन्छ ‘कुशलतापूर्वक ऋणमा डुबिरहनु ।’ यद्यपि हामी अमेरिकनहरूले १९३० देखि १९८० सम्म यसलाई बुझिरहेका थियौँ, यसलाई शिक्षाका रूपमा लिने समय हो ।
राम्रो अर्थनीतिलाई राम्रो अर्थशास्त्री चाहिँदैन । धेरैजसो साँच्चैका महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरू, त्यो एउटा जसले राष्ट्रलाई डुबाउने वा पौडी खेल्ने निर्णय गर्छ, अर्थशास्त्रका ज्ञाता नभएका बुद्धिजीवीहरू यसको पहुँचमा छन् । प्राज्ञिक अर्थशास्त्रीहरू जसलाई ठूलो अङ्ग्रेजी इ अक्षरले सङ्केत गरिन्छ महत्वका साथ त्यो सत्य वस्तुका बारेमा थोरै भन्छ । यहाँका विशेषज्ञद्वारा धम्क्याउने काम रोक्नुपर्छ भन्नमा नागरिकको सरोकार रहेको छ ।
ह्या जुन चिङ वास्तवमा पुँजीवादका विरोधी होइनन् । उनले यो कुरा उक्त पुस्तकको निष्कर्षमा लेखेका पनि छन् । उनले भनेका छन् म सबै किसिमको पुँजीवादको विरोधी होइन । म त खुला— बजार पुँजीवादको मात्र विरोधी हुँ । यस्ता कुरा हाले मात्र भनेका होइनन् । यसअघि एमपी टोडारोको पुस्तक डिभलप्मेन्ट इन थर्ड वर्ड, थोमस पिकेटीको ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी क्यापिटल वा उनकै इनइक्वैटी वा अमत्र्य सेनको अन सर्टेन ग्लोरी जस्ता विश्वका चर्चित पुँजीवादी अर्थशास्त्रीले लेखेका पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ ।
विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिले रोबोटिज, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, नानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम कम्प्युटिङ, बायोटेक्नोलोजी, द इन्टरनेट थिङ्ग्स, ब्लकचेन, थ्री डी प्रिन्टिङ र अटोनोमस भेइकलले प्रवेश पाइसकेका छन् । यी प्रविधिमाथिका क्रान्तिले कुनै पनि नामको पुँजीवादको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा विश्वमा पछिल्लो क्रममा भएका आर्थिक मन्दी, पुँजीवादी राष्ट्रका बीचमा चलेका घोषित÷अघोषित व्यापार युद्धहरूले पुष्टि गरिराखेको छ । साथै अहिले पनि हाले भनेजस्तै समाजवादी राज्यबाट सापट लिइएका योजना अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी राष्ट्रहरूले जीवनरक्षाका लागि प्रयोग गरिराखेका छन् । यसबाट उत्तरसाम्राज्यवादी पुँजीवादको सङ्कट अब असाध्य भएको पुष्टि गर्दछ ।
२०७५ माघ १५ गते मङ्गलबार प्रकाशित